Madaxweyne Gaas oo Waraysi uu siiyay Daljir ku Canbaareeyay weerarkii Al-shabaab ee Garowe [DHAGAYSO] – Radio Daljir
Abriil 20, 2015 11:57 b 0
Isniin, Abriil 20, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha dawladda Puntland C/wali Max’ed Cali Gaas ayaa fal fool xun ku tilmaamay qarixii maanta ka dhacay magaalada Garowe ee lagu qaaday shaqaalaha QM. Wuxuuna ku eedeeyey ururka Al-shabaab in markii lagu jabiyey goobaha dagaalka ay dadka bir ma gaydada ah ku beegsanayaan magaalooyinka.
M/weynaha ayaa sheegay inay in dawladda ay qaadayso tallaabooyin lagu sugayo amniga guud ee PL, si gaar ahna shaqaalaha UN-ka, wuxuuna tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii dhaawacmay Qarixii maanta ka dhacay Garowe.
Arrimaha ayuu M/weynuhu kaga hadlay wareysi gaar ah oo uu caawa siiyey Radio Daljir, waxaana khadka telefoonka ee magaalada Addis-Ababa kula xiriiray Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo ugu horrayn weydiiyey dareenkiisa ku aaddan dhacdadaas